Ethiopia Oo Sheegayo Inay Yeelan Doonta Madaxaweyne Ama Ra’iisul Wasaare Xigeen Somali Ah | Berberatoday.com
Ethiopia Oo Sheegayo Inay Yeelan Doonta Madaxaweyne Ama Ra’iisul Wasaare Xigeen Somali Ah
ddis Ababa(Berberatoday.com)-Gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, Faarax Macalin Dawaar ayaa sheegay war ka yaabiyey dad badan oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka Soomaali Galbeed, oo ku saabsan mustaqbalka siyaasadeed ee Ethiopia.
Faaraax Macallin waxa uu yidhi ” Kaddib doorashada guud ee soo socota, madaxweynaha ama ra’iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya waxa uu ahaan doonaa qof ka soo jeeda qowmiyadda Soomaalida. Itoobiya waxa ay furtay bog taariikheed oo aad u xoog badan. Sinnaan iyo cadaalad u dhexeysa Itoobiyaanka ayaa si awood badan uga hirgali doonta. Ilaahay ayaa ku mahadsan awooddii ay lahayd Geeska Africa banaanka ayaa la keenay.”